အိုင်ဘီဘီကိုဘီဟားစ်၌ဖွဲ့စည်းခြင်း - ဘီဟားမားရှိ LLC
သင်သည်ဘဟားမားတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကသင်သည်မှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိနေသည် -
● Bahamas ဘဏ်အကောင့်ဖြင့်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း
● Bahamas ဘဏ်အကောင့်ဖြင့်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
● Bahamas ဘဏ်အကောင့်နှင့်ကုမ္ပဏီပူးပေါင်းမှု
● Bahamas ဘဏ်စာရင်းဖြင့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း
● Bahamas ဘဏ်စာရင်းဖြင့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
● Bahamas ဘဏ်စာရင်းဖြင့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီနှင့်ပေါင်းစည်းခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည် Bahamas ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် Bahamas တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ Bahamas တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Bahamas တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Bahamas ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Bahamas ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် Bahamas ရှိ Offshore ကုမ္ပဏီများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပံ့ပိုးပေးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ Bahamas အတွက်သာ။ ကောင်း၏စျေးနှုန်းကိုကမ်းလှမ်းနိုင်ပါတယ်
Million Makers Bahamas သည်ဖောက်သည်များအား Bahamas နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံအတွက်အခမဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းကိုပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Bahamas ရှိကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကမ်းလွန်ဒေသများနှင့်လွတ်လပ်သောဇုန်ကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းရန် Bahamas ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုကမ်းလှမ်းသည်။
လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကိုလက်ခံရရှိသည်နှင့်ချက်ချင်း Bahamas အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းလျှောက်လွှာတင်သည်။
သင်၏ Bahamas တွင်ထည့်သွင်းထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီတွင် Bahamas ရှိဘဏ်အကောင့်တစ်ခုရှိရန်လိုအပ်ပါသလား။ ဒါမှမဟုတ်သင်ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်လိုအပ်ရင်။
Bahamas တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်သင်၏ကုမ္ပဏီအတွက် Corporate စာရွက်စာတမ်းများနှင့် / သို့မဟုတ်ဘဏ်သုံးပစ္စည်းများပေးပို့ခြင်း (အမိန့်ပေးလျှင်) ။
သင်၏ Bahamas နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအတွက်သင်၏တစ်နေရာတည်းတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။
Bahamas အတွက်ဘဏ်ငွေစာရင်း၊ Bahamas အတွက်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ Bahamas အတွက် Virtual နံပါတ်၊ Bahamas အတွက် CRM Solutions၊ Bahamas အတွက် virtual office၊ Bahamas အတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းစသည့် ၁၀၉ ခုနှင့်အတူ Bahamas နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတို့အတွက်စီးပွားရေးဆိုင်ရာအဖြေများကိုပေးသည်။ နိုင်ငံများနှင့်အများကြီးပို။
ယနေ့သင်၏ဘီဟားမား IBC အမည်ရယူပါ။
သင့်ရဲ့ Bahamas IBC Name ကိုရှာပါ
နိဒါန်း Bahamas ကုမ္ပဏီနှင့်မိတ်ဆက်ပေးခြင်း
ဘဟားမားစ်သည်အနောက်အင်ဒီးစ်အနောက်မြောက်အစွန်ဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ယခင်ကဗြိတိသျှပြည်နယ်သည် ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင်ဓနသဟာယအတွင်းလွတ်လပ်သောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဘဟားမားတွင်နေထိုင်သူ ဦး ရေ၏အများစုမှာအာဖရိကဒေသဖြစ်သည်။ ရောနှောထားသောဥရောပနှင့်အာဖရိကတို့၏အမွေအနှစ်အနည်းငယ်မျှသာရှိပြီးအင်္ဂလိပ်ရှေ့ဆောင်ဘုရားဖူးများနှင့်အမေရိကန်တော်လှန်ရေးမှထွက်ပြေးလာသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဆွေမျိုးအနည်းငယ်မျှရှိသည်။
လူ ဦး ရေများပြားလာမှုသည်မြို့ပြဒေသများ (အထူးသဖြင့်နာဆောနှင့် Freeport) တို့၏ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုအာရုံစိုက်ထားသည့်ကြားမှ၊ အချို့သောမြို့များတွင်စိုက်ပျိုးနည်းနည်းနှင့်ငါးမျှားခြင်းနည်းသောထုံးစံအရအရှေ့တောင်ပိုင်းကျွန်းများတွင်ထူးခြားသည်။ ဘဟားမားတွင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငွေကြေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုများအပေါ်များစွာမှီခိုနေသည့်လွှမ်းမိုးသောစျေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ရှိသည်။ လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏စုစုပေါင်းအများပြည်သူဆိုင်ရာပစ္စည်း (GNP) သည်ထိုဒေသရှိအထင်ရှားဆုံးဖြစ်သည်။
ဓာတ်သတ္တုလုပ်ငန်းများကိုဆားနှင့်ကွန်ကရစ်ဖန်တီးခြင်းကိုကန့်သတ်ထားသည်။ စွမ်းအင်ကိုတင်သွင်းထားသောရေနံနှင့်အရည်ပျော်သောရေနံဓာတ်ငွေ့များမှလုံး ၀ ထုတ်လုပ်သည်။ အင်အားထုတ်လုပ်မှုဘူတာအားလုံးကျွန်းများမှတဆင့်တည်ရှိသည်နေကြသည်။ ကျယ်ပြန့်သည့်အတိုင်းအတာဖြင့်တိုင်းပြည်၏အရေးအကြီးဆုံးဖလှယ်ရေးကြံရာပါအမေရိကန်သည်အမေရိကန်ဖြစ်သည်။ အခြားအပြန်အလှန်လဲလှယ်မှုများတွင်ပြင်သစ်၊ ယူကေ၊ တူရကီနှင့်ကိုင်ကို့စ်၊ ဂျပန်၊ ပနားမားနှင့်အာဂျင်တီးနားတို့ပါဝင်သည်။ သိသာထင်ရှားသောသွင်းကုန်များတွင်စက်ပစ္စည်းများနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိရိယာများ၊ အစားအစာများနှင့်တွင်းထွက်ပစ္စည်းများဖြည့်တင်းသည်။ သိသာသောနှုန်းထားများမှာရေနံနှင့်ကျောက်ပုစွန်များဖြစ်သည်။ ဥရောပသမဂ္ဂနှင့်နိုင်ငံအနည်းငယ်ကမူဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှပစ္စည်းအချို့ကိုအထွေထွေ ဦး စားပေးစနစ်အောက်ရှိတာဝန်ဝတ္တရားများမှကင်းလွတ်စေခဲ့သည်။
ဘဟားမားအစိုးရသည်ဘာဟီယမ်နှင့်ပြည်ပမှစျေးကစားသူများအတွက်တံခါးများဖွင့်ထားသည့်ရင်းနှီးသောရာသီဥတုကိုအာရုံစိုက်သည်။ နိုင်ငံ၏ဥပဒေများသည်ဘာဟားမားစ်၏ဘဏ္theာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်တိုးတက်မှုကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုခြင်းအပေါ်ဗဟိုပြုသည်။ ထင်ကြေးပေးသူများကဘဟားမားကိုကမ္ဘာအနှံ့သို့မဟုတ်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အမျိုးမျိုးသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်လျောက်ပတ်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်စေသည်။
စတင်ရန်အရည်အချင်းပြည့်မှီသောဘဏ္specialistsာရေးကျွမ်းကျင်သူများသည်ထင်မြင်ချက်ကိုတွန်းအားပေးရန်လျှောက်ထားရမည်။ လှုံ့ဆော်သူများသည်အင်းများနှင့်ကွန်ဒိုများအပါအ ၀ င်သီးခြားအဆောက်အအုံများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ရေနံစိမ်းပစ္စည်းများနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲများတင်သွင်းခြင်းအတွက်အကောက်ခွန်တာဝန်မှကင်းလွတ်ခွင့်များကိုမှတ်မိသည်။ နှင့်စစ်မှန်သောပိုင်ဆိုင်မှုစွဲချက်, ထုတ်ယူကုန်ကျစရိတ်နှင့်တံဆိပ်ခေါင်းတာဝန်ကနေချွင်းချက်။ အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအနေဖြင့်ဘဟားမားအစိုးရအနေဖြင့်အောက်ပါတို့အပါအ ၀ င်တိကျသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိခြင်းကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးသည်။
ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်၊ Bahamas ရှိသူတို့၏အသင်းအဖွဲ့အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်နေစဉ်အဖွဲ့အစည်းများတွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ Bahamas တွင်ပူးပေါင်းရန်ဆန္ဒရှိသောအဖွဲ့အစည်းများသည် ၁၉၉၂ ခုနှစ်ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေအရပူးပေါင်းပါ ၀ င်သည့်“ ပြည်တွင်းဖြစ်အဖွဲ့အစည်းများ” (သို့) ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေအရပေါင်းစည်းထားသော“ IBCs” အဖြစ်ဆုံးဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ထိုနည်းတူ Bahamas များသည်လည်းအကျွမ်းတဝင်မရှိသောအဖွဲ့အစည်းများ၊ တစ် ဦး တည်းပိုင်၊ သီးခြားမှတ်တမ်းတင်ထားသောအဖွဲ့အစည်းများ၊ အသင်းအဖွဲ့များ၊ ကန့်သတ်ထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများ၊
တတိယအနေဖြင့်အခွန်လျှော့ချခြင်းသည်နိုင်ငံ၏ပမာဏများစွာရှိသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နေသောသို့မဟုတ် Bahamas တွင်နေထိုင်သောမည်သူမဆိုအတွက် Bahamas တွင်ပေးဆောင်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစရိတ်များ၊ အရင်းအနှီးထပ်ဆောင်းကောက်ခံမှုများ၊ အမွေအနှစ်တာဝန်ခံမှု၊ ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ၀ န်ဆောင်ခကိုခွင့်ပြုချက်ယူရန်လိုအပ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအချို့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်မှာ ၇.၅% ဖြစ်သည်။ အိမ်ဝယ်သူများနှင့်စစ်မှန်သောပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်သူများသည်တံဆိပ်ခေါင်းခနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများကိုပေးရပြီးစစ်မှန်သောပိုင်ဆိုင်မှုများဝယ်ယူရန်စရိတ်များပါ ၀ င်သည်။ တည်ငြိမ်သောဘဏ္climateာရေးအခြေအနေ၊ ပုံမှန်ပြောင်းလဲခြင်းစံနှုန်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသည့်ကုန်သွယ်ရေးထိန်းချုပ်မှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် ၄ ​​င်းတို့၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုအိမ်သို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခြင်းအားဖြင့်အဖွဲ့အစည်းများကိုထပ်မံထိန်းသိမ်းထားသည်။
အသစ်သောအဖွဲ့အစည်းများသည်သူတို့၏ပထမနှစ်လှုပ်ရှားမှုတွင်ကုန်ကျငွေဒေါ်လာ ၁၀၀ ကိုလည်ပတ်ခွင့်ပြုသည်။ ပထမအကြိမ်အတူတကွအလုပ်လုပ်ပြီးနောက်အခများကိုလည်ပတ်ခွင့်သည်လုပ်ငန်း၏ဝင်ငွေအားလုံးအပေါ်မူတည်သည်။
Bahamas ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် - ကျွန်ုပ်တို့သည် Bahamas၊ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ Bahamas တွင်လုပ်ငန်းစတင်ခြင်းနှင့် Bahamas သို့မဟုတ်ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ ခုတွင် setup business အတွက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်အတွက်တစ်နေရာတည်းတွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။
Bahamas ရှိ Company Incorporation ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည် Bahamas ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းမှစီးပွားရေးအဖြေများကိုအစမှအဆုံးသတ်ရန်နှင့် Bahamas ရှိ virtual office၊ Bahamas ရှိ virtual office နှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော HR ဖြေရှင်းချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက်ကျွမ်းကျင်သောနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုငှားရမ်းရန်လည်းကူညီသည်။ Bahamas ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၀ ယ်ခြင်း၊ Bahamas တွင် virtual နံပါတ်၊ Bahamas တွင်စီးပွားရေးတိုးချဲ့ခြင်း၊ Bahamas ရှိဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Bahamas တွင်ဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ Bahamas ရှိစီးပွားရေးတန်ဖိုး၊ Bahamas ရှိ CRM Solutions၊ Bahamas ကုန်သည်အကောင့်သို့မဟုတ် Bahamas ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ Bahamas တွင် Web development၊ Bahamas ရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ Bahamas ရှိ Ecommerce Development၊ Bahamas တွင်အက်ပ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ Bahamas တွင် software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ Bahamas ရှိဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ စျေးနှုန်းချိုသာပြီးစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ဖော်ပြသည်။
Bahamas တွင်တည်ထောင်ပြီးဖြစ်သောကုမ္ပဏီများအတွက် - Bahamas နှင့် Offshore ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် Bahamas မှကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်အဆုံးမှအဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။ Bahamas ရှိသို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာ၏စိတ်ကြိုက် HR ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကိုအရည်အချင်းပြည့်မှီသောဝန်ထမ်းများငှားရမ်းရာတွင်ကူညီသည်။ Bahamas ရှိကုန်သွယ်မှုနှင့် ၀ ယ်ယူခြင်း၊ Bahamas တွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Bahamas ရှိ virtual နံပါတ်များ၊ Bahamas တွင်နိုင်ငံတကာတိုးချဲ့ခြင်း၊ Bahamas ရှိတရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Bahamas ရှိစီးပွားရေးအတွက်စီးပွားရေးအကဲဖြတ်ခြင်း၊ Bahamas ရှိဘဏ္financialာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ Bahamas ရှိ CRM Solutions၊ Merchant account နှင့် payment gateway Bahamas ရှိအိုင်တီဖြေရှင်းနည်းများ၊ Bahamas ရှိ Web development၊ Bahamas ရှိအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ Bahamas ရှိအက်ပလီကေးရှင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ Bahamas ရှိဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ အလွန်ယှဉ်ပြိုင်မှုမှာအနည်းငယ်အမည်ကိုဖို့ Bahamas အတွက် Blockchain ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ စျေးနှုန်းများ။
Bahamas ရှိ IBC အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျစရိတ်
Bahamas အတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Bahamas အတွက်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု
“ Million Makers မှာကျွန်တော်တို့ဟာဘာဟားမားနဲ့ကမ္ဘာအနှံ့မှာရှိတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ယောက်မှတောင်မှကမ်းလှမ်းတဲ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံမှာ ၀ န်ဆောင်မှုတွေအများကြီးပေးနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာဖြေရှင်းချက်တွေကိုအဆုံးစွန်ပေးနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာအကြီးမားဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထဲကတစ်ယောက်လို့ပြောရင်မှန်တယ်။ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားကူညီခြင်း၊ စီးပွားရေး၏အတိုင်းအတာကြောင့်ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ဘဟားမားတွင်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။ WE Bahamas အတွက်အဖြေရှာပေးသူတစ် ဦး တည်း။
Bahamas ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအကျိုးဆောင်များနှင့် Bahamas ရှိအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုစာရင်းကိုင်များကသင့်အားလမ်းပြလိမ့်မည်။
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း ဘဟားမား (၁ နှစ်)
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ဘဟားမား (နှစ် ၂ နှစ်)
အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခအတွက်ကျသင့်သည် ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း ဘဟားမား
များအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ဘဟားမား
Bahamas စီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများဘဟားမား
Bahamas စီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ ဝန်ဆောင်မှုကြေး
ကုန်သည်စာရင်း Bahamas / Payment Gateway Bahamas
Logo ကုမ္ပဏီစီးပွားရေးအတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း Bahamas
Bahamas ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
Bahamas Offshore ကုမ္ပဏီအတွက်တရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်များတိုးမြှင့်ခြင်း
Bahamas စီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက်စာရွက်စာတမ်းများ Apostille
Bahamas Offshore ကုမ္ပဏီအတွက်သံရုံးမှတရားဝင်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကုမ္ပဏီ Chop and Seal Bahamas
Bahamas ရှိနောက်ထပ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပိတ်ပါ
Bahamas ရှိနောက်ထပ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပြပါ
Bahamas ရှိ IBC အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ
● IBC Bahamas ဝန်ဆောင်ခ (၁ နှစ်) - ဒေါ်လာ ၉၀၀
● Bahamas တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်အစိုးရအခကြေးငွေနှင့် ၀ န်ဆောင်ခများ - ၆၅၀ ဒေါ်လာ
●အမည်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း (ကျေးဇူးပြု၍ Bahamas ရှိကုမ္ပဏီ TYPE3ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာအမည် ၃ ခုပေးပါ
● IBC အတွက် Bahamas တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်တင်သွင်းခြင်း
● Bahamas ရှိ IBC အတွက်အစိုးရအခွန်ငွေတစ်နှစ်ပေးဆောင်ခြင်း
● Bahamas ရှိ IBC အတွက်မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်နှင့်မှတ်ပုံတင်ထားသောလိပ်စာကိုတစ်နှစ်ထောက်ပံ့ရန်
● Bahamas ရှိ IBC အတွက်ကုမ္ပဏီအတွင်းရေးမှူးကိုတစ်နှစ်ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
● Bahamas ရှိ IBC အတွက်သင့်အတွက်စံပြကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများလည်းပါ ၀ င်သည်။ အသင်း ၀ င်စာချွန်လွှာများ၊ အသင်း ၀ င်မှုများ၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊ အစုရှယ်ယာလက်မှတ်၊ ပထမဒါရိုက်တာများခန့်အပ်ခြင်း၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်းဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
Bahamas တွင်စီးပွားရေးစတင်ရန်၊ ဒေသအရင်းအမြစ်များကိုသင်နှင့်နီးစပ်စေရန်အခမဲ့အကြံပေးသည်။ သင် Bahamas သို့မဟုတ်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ၌စီးပွားရေးစတင်ချင်လျှင်အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်သည်။
IBC Bahamas အတွက်ကုန်သည်အကောင့်
Bahamas ရှိ IBC ၏ဒါရိုက်တာအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည်
IBC Bahamas အတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
IBC Bahamas အတွက်တရားဝင်အစုရှယ်ယာတိုးပွားလာခြင်း
ဘယ္လို ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ Million Makers မှတဆင့် Bahamas ၌တည်၏
အကယ်၍ သင်သည် Bahamas တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်လိုပါက Bahamas ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် Bahamas ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များကိုမည်သို့မည်ပုံမှတ်ပုံတင်ရမည်ကိုရှင်းလင်းစွာ၊ Bahamas ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များသည် Bahamas ရှိကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် Bahamas ရှိ Offshore ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ Bahamas အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ၏နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းကွန်ယက်နှင့် Bahamas ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအနေဖြင့်သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဆက်သူအနေဖြင့်သင်သည် Bahamas ရှိကော်ပိုရိတ်ဘဏ်စာရင်းများဖွင့်လှစ်ရာတွင်ကူညီပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ငါတို့မှတဆင့်ဘဟားမား။ သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီ Bahamas တွင်ပါဝင်သည်။ သင်လျှောက်ထားလိုပါကသင်နှင့်သင်၏မိသားစုအတွက် Bahamas အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်အစုံကိုလည်းသင်ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ ၎င်းတွင် Bahamas လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သောကျွမ်းကျင်သည့်အကူအညီများပါဝင်သည်။ အဘို့ ဘဟားမားနေထိုင်ခွင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Bahamas ရှိလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများသည် Bahamas ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသောဖောက်သည်များအား“ ၁ နာရီအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေး” ပေးသည်။
B Bahamas တွင်အလုပ်လုပ်ခွင့်
B Bahamas တွင်နေထိုင်ခွင့်
aham Bahamas စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး
aham Bahamas များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်
ကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေနှင့်ဆက်သွယ်ပါ ဘဟားမား ဥပဒေရေးရာအတွက် နေထိုင်ခွင့် ဘဟားမား.
Bahamas ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ သင်သိထားသင့်သည့်အရာအားလုံး၊ Bahamas ရှိ Company Incoporation နှင့် Bahamas ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဟုလည်းလူသိများသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Bahamas တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မားသောလည်ပတ်မှုကြောင့် Bahamas ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Bahamas ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ Bahamas ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတိုင်ပင်ခံများနှင့် Bahamas ရှိအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။
ဘီဟားစ်၌ IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ - ဘဟားမားတွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း
Million Makers မှကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးထားပါသည်၊ ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိဘာဟားမားစ်အပါအ ၀ င်ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှပင်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Bahamas နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံတို့တွင်စီးပွားရေးအဖြေရှာမှုများကိုအစပြုခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုပြောသင့်သည်။ စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်“ ဘဟားမားတွင်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများ” ကိုပေးသည်။
WE Bahamas အတွက်အဖြေရှာပေးသူတစ် ဦး တည်း။
Bahamas ရှိ LLC တွင်ရှိသော IBC ၏အခြေခံ ၀ န်ဆောင်မှုတွင် -
Registry တွင် Bahamas ကိုကုမ္ပဏီအမည်ရှာဖွေပါ။
Bahamas တွင်ရှယ်ယာရှင်များ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်း ၀ င်များကိုမှတ်ပုံတင်ပါ။
Bahamas ရှိ LLC အနေဖြင့် IBC အတွက်အသင်း၏စာချွန်လွှာနှင့်စာတမ်းများ။
အိုင်ဟီဘီအတွက် Bahamas / LLC ရှိအိုင်ဘီဘီကိုဝေငှပါ။
IBC အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း Bahamas / LLC တွင်မှတ်ပုံတင်ပြီး Bahamas တွင်မှတ်ပုံတင်ထားပါသည်။
မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်, Bahamas / LLC တွင်ရှိသော IBC တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါက။
မှတ်ပုံတင်ရုံး, မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ခဲ့လျှင်, IBC Bahamas / LLC တွင် IBC ။
ဘီဟားမားစ်၌ BBC / LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်းတွင် IBC မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ Bahamas ရှိ IBC / Bahamas ရှိ LLC ။
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများ: သငျသညျ Bahamas အတွက်လိုအပ်သောလိုင်စင်မရှိဘဲလုပ်ဆောင်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်မှခွင့်ပြုထားသည့် Bahamas တွင်ခွင့်ပြုချက်ပြုပါက Million Makers မှကျွန်ုပ်တို့သည်လိုင်စင်မရသောလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သော Bahamas ရှိဘဏ်စာရင်းဖွင့်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုသင့်အားကူညီနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများဥပမာအနည်းငယ်ကစားခြင်း၊ လောင်းကစားခြင်း၊ Bahamas ရှိနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုတွင်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ အရောင်းအ ၀ ယ်ခြင်း၊ Bahamas ရှိဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်ငန်း၊ Bahamas ရှိအာမခံလုပ်ငန်း၊ ဘဏ္,ာရေးနှင့်ကုန်စည်အခြေခံသောအနကျအဓိပ်ပါယျတူရိယာများနှင့် Bahamas ရှိအခြားအာမခံလုပ်ငန်းများ၊ Bahamas ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လုံခြုံစွာထိန်းသိမ်းထားသော ၀ န်ဆောင်မှုများ။
သင်က Bahamas ရှိ Crytocurrency လိုင်စင်၊ Forex အကျိုးဆောင်သို့မဟုတ်လောင်းကစားလိုင်စင်လိုင်စင်ချထားမှုအတွက်အကူအညီလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
Bahamas နှင့် "၁၀၉ နိုင်ငံအပါအ ၀ င်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ပြည်နယ် ၅၀ အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ" တွင်ကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များ။
သန်းပေါင်းများစွာသောကုန်သည်များသည် Bahamas တွင်သာမကနိုင်ငံတကာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များနှင့် Bahamas ရှိ Professional CFA နှင့်ပေါင်းသင်းခြင်း၊ Bahamas ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Bahamas ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ Bahamas ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတိုင်ပင်ခံများဖြင့် Bahamas တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Bahamas ရှိတစ် ဦး ချင်းအခွန်ထမ်းများနှင့်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများအတွက် Bahamas တွင်ကြီးမားသောအစုစုကိုစီမံခန့်ခွဲသည်။
Bahamas ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် Bahamas တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် Bahamas နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတို့တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းတို့ဖြင့်ဖောက်သည်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။
Bahamas ရှိလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ နာဆောအတွက် Corporate န်ဆောင်မှု
ဘဟားမားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ဘဟားမားရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ဘဟားမားရှိကုမ္ပဏီများအတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘဟားမားတွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ဘဟားမားရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘဟားမားတွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ဘဟားမားရှိကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Bahamas ရှိ Offshore Company အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Bahamas ရှိ Offshore Company တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် Bahamas ရှိ Corporate Services အတွက် Bahamas မှ Corporate အတိုင်ပင်ခံ
Bahamas ရှိကုမ္ပဏီအတိုင်ပင်ခံ | နာဆောမြို့ရှိစီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံ
Bahamas နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏အထူးပြု ၀ န်ဆောင်မှုများ
Bahamas တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပြီးနောက် Bahamas တွင်ကော်ပိုရိတ်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ပါ။
သင်၏ကုမ္ပဏီ Bahamas တွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့်အွန်လိုင်းလျှောက်ထားပါ အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်သည်အကောင့် ဘဟားမား.
Bahamas ရှိငွေစာရင်းများ Outsourcing
သင်၏ကုမ္ပဏီသည်သင် outsource လုပ်နိုင်သည့် Bahamas တွင်ထည့်သွင်းထားသည် စာရင်းကိုင်လိုအပ်ချက်များကို Bahamas ၌တည်၏။
ရှိပြီးသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဝယ်ယူပါ Bahamas ရှိကုမ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာများကိုဝယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ် Bahamas တွင်ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
HR အတိုင်ပင်ခံ Bahamas တွင်သင်၏ HR ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် Bahamas တွင်လူသစ်စုဆောင်းခြင်းကိုသင်၏ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးမှလျှော့ချနိုင်သည်
ကျနော်တို့ကိုထောကျပံ့ Bahamas ရှိအဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောကုမ္ပဏီ နှင့်လည်းလူသိများ Bahamas နှင့်အမေရိကန်အပါအဝင် 107 နိုင်ငံများ, "အသက်ကော်ပိုရေးရှင်း"Bahamas ၌တည်၏
Bahamas တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနောက်သင်၌အခြားဝန်ဆောင်မှုများလိုအပ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ ဘဟားမား.
Bahamas ရှိ cryptocurrency လိုင်စင်
သင်အကူအညီလိုအပ်ပါက cryptocurrency လိုင်စင် ကမ်းလွန်သို့မဟုတ်အီးယူတရားစီရင်မှုများအတွက်ဘဟားမားကနေ။
Bahamas ရှိ CRM Solutions
CRM ဆော့ဝဲ Bahamas ရှိအခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအပါအ ၀ င်သင်၏ Bahamas ရှိသင်၏ဖောက်သည်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အထောက်အပံ့ကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်ရန်ကူညီသည်။
Virtual Number - Bahamas အတွက် VoIP
Virtual နံပါတ် နှင့် Bahamas ရှိ Business VoIP အပါအဝင် Bahamas ရှိအခြား VoIP ဖြေရှင်းချက်များ Bahamas ရှိ Residial VoIP ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း လျှောက်လွှာ ၁ ခုသာရှိသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၁၉ နိုင်ငံရှိဗဟားမားစ်မှဖြစ်သည်
ငါတို့အသင်း ဝဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း ဘဟားမား Bahamas တွင်ထည့်သွင်းထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီသစ်အတွက်လှပပြီးထူးခြားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်၊ $ 100 နှင့်အတူစတင်
Bahamas ရှိ Software Development ကုမ္ပဏီ
ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပေး Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဘဟားမား, Bahamas ရှိ CryptoCurrency Software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် Bahamas ရှိ App ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
စျေးနှုန်းချိုသာသော software ကို Bahamas ရှိဖွံ့ဖြိုးမှု | Bahamas ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
တစ် ဦး ချင်း၊ စတင်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောတစ် ဦး ချင်းစီ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် Bahamas တွင်အမြန်ဆုံးကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းရန်နှင့်၎င်းတို့လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ တိကျသောလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အစိုးရစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်လျင်မြန်စွာလိုက်နာရန်ပါဝင်သော Bahamas ၏တိကျသောလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလိုက်နာရန်ရှာဖွေနေသည်။ Bahamas ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်ဖောက်သည်၏ကြိုက်နှစ်သက်သောကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းတည်နေရာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝမှုနှင့်ဘာဖြစ်နိုင်သည်၊ ၎င်းတို့ကိုမကူညီမည့်အရာများအကြောင်းရိုးသားစွာဖြင့်သူတို့၏ကုမ္ပဏီများသည် Bahamas တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်ကြသည်။
Bahamas တွင်နေထိုင်သော IBC နှင့် Bahamas ရှိ IBC ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုနိုင်ငံခြားသားများအားထောက်ပံ့ပေးသည်။ ၄ င်းကို Bahamas တွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Bahamas တွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Bahamas ကမ်းလွန်ရှိ IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Bahamas ရှိ IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Bahamas ကမ်းလွန် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ , Bahamas IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Bahamas IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Bahamas IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Bahamas ကမ်းလွန် IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Bahamas ကမ်းလွန် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ဘီဟားစ်တွင် IBC ပါဝင်မှုကိုထောက်ပံ့သည် ဘီဟားမားတွင် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း | Bahamas တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း Bahamas ရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်း Bahamas တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | ဘဟားမားတွင် IC ပါဝင်မှု | Bahamas တွင် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | အိုင်ဘီဘီကုမ္ပဏီ Bahamas တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း Bahamas တွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ကျနော်တို့ Bahamas တွင်နေထိုင်သူများနှင့် Bahamas တွင် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကိုလည်းထောက်ခံသည်, Bahamas တွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း, Bahamas တွင်ထည့်သွင်း, LLC, Bahamas မှာကမ်းလွန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, Bahamas အတွက် Offshore LLC မှတ်ပုံတင်, Bahamas အတွက်မှတ်ပုံတင်, Offshore LLC မှတ်ပုံတင် , Bahamas LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Bahamas LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Bahamas LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Bahamas ကမ်းလွန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Bahamas ကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Bahamas ရှိနေထိုင်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကို Bahamas ရှိ International Business Company ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်ကူညီသည်။ ၄ င်းကို Bahamas ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Bahamas ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ Bahamas ရှိကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Bahamas တွင် Offshore အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ Bahamas အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Bahamas အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Bahamas အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Bahamas ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Bahamas ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
Bahamas ရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Bahamas ရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Bahamas ရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းစသည့်ဘဟားမားတွင်နေထိုင်သောနိုင်ငံခြားသားများနှင့် Bahamas ရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ Bahamas, Offshore Offshore Business Company နှင့် Bahamas ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Bahamas ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Bahamas ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Bahamas ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Bahamas ကမ်းလွန်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Bahamas ရှိနေထိုင်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကို Bahamas တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုထောက်ခံသည်။ ၎င်းသည် Bahamas တွင် International Company Registration, Bahamas တွင် International Incorporation, Bahamas ရှိ Offshore International Company ဖွဲ့စည်းခြင်း, Bahamas ရှိ Offshore International Company Registration, Offshore International Bahamas တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Bahamas အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Bahamas အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Bahamas အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Bahamas ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Bahamas ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
Bahamas ရှိ IC နေထိုင်သူများနှင့် Bahamas ရှိ IC ဖွဲ့စည်းမှုရှိနိုင်ငံခြားသားများကိုလည်း Bahamas တွင် IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Bahamas တွင် IC ပါဝင်ခြင်း၊ Bahamas ရှိကမ်းလွန် IC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Bahamas ရှိကမ်းလွန် IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Bahamas တွင်ကမ်းလွန် IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ , Bahamas IC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Bahamas IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Bahamas IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Bahamas ကမ်းလွန် IC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Bahamas ကမ်းလွန် IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Bahamas ရှိနေထိုင်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအား Bahamas တွင် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုထောက်ပံ့သည်။ Bahamas တွင် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Bahamas တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ Bahamas ရှိ Offshore LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Bahamas, Offshore LLC တွင်ရှိသော Offshore LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။ Bahamas LLC တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Bahamas LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Bahamas LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Bahamas ကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Bahamas ကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
Bahamas ရှိ IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Bahamas ရှိ IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Bahamas ရှိ IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Bahamas ရှိ IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Bahamas ရှိကမ်းလွန်ရှိ IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အိုင်ဘီဘီကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Bahamas IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Bahamas IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Bahamas ကမ်းလွန် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Bahamas ကမ်းလွန် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
Bahamas ရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Bahamas ရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Bahamas ရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကမ်းလွန်ပင်လယ်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများ၊ Bahamas ရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Bahamas ရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကို Bahamas ရှိနေထိုင်သူများကိုကူညီသည်။ Bahamas တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Bahamas စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Bahamas စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Bahamas စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Bahamas ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Bahamas ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
IBC ကိုဗဟားမားတွင်မှတ်ပုံတင်ပါ Bahamas ရှိ LLC ကိုမှတ်ပုံတင်ပါ Bahamas ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Bahamas ရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Bahamas ရှိနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း IC ကို Bahamas တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ Bahamas ရှိ LLC ကုမ္ပဏီကိုမှတ်ပုံတင်ပါ အိုင်ဘီဘီကုမ္ပဏီကိုဘဟားမားတွင်မှတ်ပုံတင်ပါ Bahamas ရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီကိုမှတ်ပုံတင်ပါ
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - Bahamas ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
Bahamas တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Bahamas တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Bahamas မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Bahamas မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Bahamas မှ Offshore ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ငါတို့မြို့များမှလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။ Bahamas တွင်အထောက်အပံ့များမှာနာဆောတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နာဆော၌မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နာဆောမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နာဆောမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နာဆောမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
Bahamas တွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း နာဆောတွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
Bahamas ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် Bahamas ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် Bahamas ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များမှ Bahamas ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုအေးဂျင့်များ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။ Nassau ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအေးဂျင့်များဖြစ်သော Nassau မှကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအေးဂျင့်များအားကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသည်။ နာဆောရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ နာဆောရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုယ်စားလှယ်များ၊ နာဆောရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ နာဆောရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ။
Bahamas ရှိအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ နာဆောတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ
Bahamas ရှိတတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ ငါတို့ပေးတဲ့ Bahamas မှာစျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုတွေ၊ ဘာဟားမားစ်မှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုတွေ၊ ဘာဟားမားစ်တွေထဲမှာကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုတွေ၊ ဘဟားမားမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုတွေကိုပေးတာ၊ နာဆာမြို့မှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ခံပါတယ်။ နာဆောမှ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ နာဆောရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ နာဆောရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ နာဆောရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊
Bahamas ရှိအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ နာဆောတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု
Bahamas ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးပါသလား။
Bahamas တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Bahamas တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန်၊ Bahamas တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်၊ Bahamas တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Bahamas တွင်တည်ထောင်သည့်ကုမ္ပဏီ၊ Bahamas တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ Bahamas ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတည်ထောင်ရန်၊ နာဆောတွင်နာဆောတွင်မှတ်ပုံတင်ပါ၊ နာဆောကုမ္ပဏီတွင်မှတ်ပုံတင်ပါ၊ နာဆောရှိ setup ကုမ္ပဏီ၊ နာဆောတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပါ၊ နာဆောကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ပါ။
Bahamas တွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသောကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ နာဆောတွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီနှင့်ပတ်သက်သော ၀ န်ဆောင်မှု
ကျွန်ုပ်သည်နိုင်ငံခြားသားတစ် ဦး ဖြစ်ပါသလား၊ ကျွန်ုပ်ကိုဘဟားမားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သင်ကူညီနိုင်ပါသလား။
Bahamas တွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Bahamas ရှိနိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Bahamas တွင်ဘဏ်စာရင်းရှိနိုင်ငံခြားသားများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်နိုင်ငံခြားသားများအားမြို့တော်၌မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နာဆောရှိနေထိုင်သူများကိုကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်၊ နာဆောတွင်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်၊ ဘဏ်အကောင့်ရှိနိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်၊
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Bahamas | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Nassau
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ် Bahamas တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ် Bahamas တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ် Bahamas တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခကုန်ကျငွေ Bahamas တွင်မှတ်ပုံတင်အခကြေးငွေ Bahamas တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကုန်ကျစရိတ် Bahamas တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကုန်ကျမှု Bahamas တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျစရိတ်၊ ဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျစရိတ် Bahamas တွင်ကုမ္ပဏီကုန်ကျသည် Bahamas တွင်ကုန်ကျသည်။
စျေးနှုန်းချိုသာသော Bahamas ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး နassauရှိစျေးသက်သာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး
ငါသည် Bahamas တွင်နိုင်ငံခြားကုမ္မဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် (သို့) Bahamas ရှိနိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း။
Bahamas တွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးစတင်ရန် (သို့) Bahamas တွင်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Bahamas ရှိနိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတည်ထောင်ရန် Bahamas တွင်ပြည့်မီရန်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်အချို့ရှိသည်။ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
Bahamas တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ နာဆော၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်း
ဘီဟားစ်၌ IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်သင်ကူညီနိုင်ပါသလား Bahamas တွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း Bahamas ရှိနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Bahamas ရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Bahamas ရှိနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Bahamas ရှိ IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း LLC Bahamas တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း အိုင်ဘီဘီကုမ္ပဏီ Bahamas တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း Bahamas တွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းလော။
Bahamas တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် Bahamas ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအကြားခြားနားချက်ကားအဘယ်နည်း။
Bahamas တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း (သို့) Bahamas တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း (သို့) Bahamas တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့အကြားကွာခြားမှုမရှိကြောင်းအသုံးပြုသူများကမေးလေ့ရှိသောဤအခြေခံမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်အတွက်၎င်းတို့သည် Bahamas တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်ပါဝင်သောကုမ္ပဏီအတွက်အသုံးပြုသောစကားလုံးများဖြစ်သည်။
Bahamas ရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစု ၀ န်ဆောင်မှုများ Bahamas ရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Bahamas ရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းလုပ်ငန်းများ
သင်၏ဘာကြောင့်ဘာဟားမားစ်၌သင်၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ဘာဟားမားရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုသင့်သနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Bahamas ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုထူးချွန်မှုကိုလည်းမြင့်မားစွာထိန်းသိမ်းထားပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မားသောပမာဏနှင့်ဘဟားမားရှိကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာစာရင်းကိုင်များကြောင့်လူသိများသော Bahamas ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနှုန်းထားများကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ Bahamas ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့် Bahamas ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတိုင်ပင်ခံနှင့် Bahamas ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
Bahamas ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်အတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ | Bahamas ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်စျေးသက်သာစာရင်းကိုင်များ Bahamas ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်စျေးသက်သာစာရင်းကိုင်များ
နေထိုင်သူမဟုတ်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအတွက် Bahamas ရှိအထူး ၀ န်ဆောင်မှုများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားအား Bahamas တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအဝင် Nassau တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်အထူးပံ့ပိုးမှုပေးသည်။ သင်ဟာနိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Bahamas မှာကုမ္ပဏီဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်၊
Bahamas တွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် Bahamas ရှိနိုင်ငံခြားသားအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း။
ယနေ့ Bahamas တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းပါ။
Bahamas တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Bahamas ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ် Bahamas တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Bahamas ရှိကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများလိုအပ်ပါက၊ သို့မဟုတ် Bahamas တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန်၊ Bahamas တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ အလားတူ Bahamas တွင်လည်း Nassau တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Nassau တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ် Nassau ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Nassau ရှိကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Nassau တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန်၊ Nassau တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ နာဆော
Bahamas ရှိကုန်ကျစရိတ်အသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း နာဆောတွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
တရုတ်နိုင်ငံသို့ Bahamas သံရုံး
ဘားမား - ခရီးသွား Tour ည့်လမ်းညွှန်များ
Grand Bahama ကျွန်းခရီးသွားလုပ်ငန်း
Bahama Out ကျွန်းများ
အဆိုပါ Bahamas Guide.com
အဆိုပါ Inagua အမျိုးသားဥယျာဉ်
The Freeport သတင်းများ
အနုပညာ | Bahamas ၏တရားဝင်ဆိုဒ်
အနုပညာနှင့်ယဉ်ကျေးမှု - thebahamasweekly.com
The Heritage Foundation: ဗဟားမားစ်
ဓနသဟာယ - ဘဟားမား
ကမ္ဘာ့အဖြစ်မှန် - ဘဟားမား
ဘီဘီစီနိုင်ငံ၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်း - ဗဟားမားစ်
FAO - ဗဟားမားစ်
လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ - ဗဟားမားစ်
မှတ်ချက် * ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ဘာဟားမားရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိုလုံး ၀ ဆန့်ကျင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤကဲ့သို့သောလူများကိုကျွန်ုပ်တို့မထောက်ခံပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ ဘဟားမား အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများသို့:
●ဘဟားမားများအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊
●ဗဟားမားစ်အတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း (သို့) ဗဟားမားစ် (သို့) သို့စက်မှုလုပ်ငန်းမှထောက်လှမ်းရေးသို့မဟုတ်ပစ္စည်းခိုးယူခြင်းများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးထားခြင်းမရှိပါ။
● Bahamas အတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုတရားမ ၀ င်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်လူမည်းများမှ Bahamas ဥပဒေအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
● Bahamas အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုတစ် ဦး ချင်းစီသို့မဟုတ် Bahamas မှသို့မဟုတ်သို့ ၀ င်သောမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်သောကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●ဘဟားမားအတွက်ကုမ္မဏီပေါင်းစပ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်လူတစ် ဦး ချင်းစီ၊ ကုမ္ပဏီများအတွက်သို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုပြုသည့်ဘဟားမားစ်မှပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်၊ ဓာတုပစ္စည်းများကိုနျူကလီးယားပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်နေသောဘဟားမားရှိကုမ္ပဏီများမှစက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများသို့ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်ခြင်း။
●ဘဟားမားများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုသည်လူသို့မဟုတ်တိရစ္ဆာန်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားပြုခြင်းသို့မဟုတ်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ခြင်းအတွက်တိရစ္ဆာန်များအားအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်သို့မဟုတ်ဘဟားမားစ်သို့သွားသောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●မွေးစားမိဘများလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသို့မဟုတ်ဘာဟားမားစ်မှဖြစ်စေ၊ သို့မှလည်းလူ့အခွင့်အရေးအလွဲသုံးစားမှုအပါအ ၀ င်မွေးစားခြင်းအေဂျင်စီများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးမထားသည့်ဘဟားမားများအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ။
●ဘဟားမားအတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်သူတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများကိုဘဟားမား (စ်) သို့ (သို့) မှသို့မဟုတ်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
● Bahamas အတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များ (သို့) ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအခြေခံသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်ဆက်ဆံသောကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●ပိရမစ်ရောင်းချမှုနှင့်ပတ်သက်သော Bahamas ရှိသို့မဟုတ်ထံမှသို့မဟုတ်သို့ Bahamas အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုလူတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●ဘဟားမားများအတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူများသို့မဟုတ်ဘဟားမားစ်မှသို့ဖြစ်စေ၊
"အရေးကြီးသတိပြုပါ : Million Makers သည်ကုမ္ပဏီတွင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဂရုစိုက်ခဲ့သည် ဘဟားမားတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသူများသည်မိမိကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်မှုမပြုမီသင့်လျော်သောကျွမ်းကျင်သောအကြံဥာဏ်များရယူရန်အကြံပေးသည် ဘဟားမား, ဘဟားမား ဘဏ်အကောင့်, ဘဟားမား ယုံကြည်မှု ဘဟားမား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ပေးအခြားမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှု ဘဟားမား။ "
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန် နှင့် ထောက်ပံ့ ဘဟားမားအဘို့
အသုံးပြုသူက https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-bahamas/ တွင်ပုံစံကိုဖြည့်စွက်ထားသည်။
အသုံးပြုသူသည်သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-bahamas/ မှလာသည်။
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဆိုက်ကပ်စာမျက်နှာ - https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-bahamas/